ဝှာင်:Symptoms of coronavirus disease 2019 4.0.svg - ဝဳကဳပဳဒဳယာ
ဝှာင်:Symptoms of coronavirus disease 2019 4.0.svg
ဝှာင် သွက်ဂွံသုင်စောဲ ဂလုပ်ဗဴ
Size of this PNG preview of this SVG file: ၈၀၀ × ၄၀၆ pixels. တၞဟ် resolutions: ၃၂၀ × ၁၆၂ pixels | ၆၄၀ × ၃၂၅ pixels | ၁၀၂၄ × ၅၂၀ pixels | ၁၂၈၀ × ၆၅၀ pixels | ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ pixels.
ဝှာင် တမ်မူလ ‎(SVG ဝှာင်, မိက်ကဵုကသပ် ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ pixels, ဇမၞော် ဝှာင်: ၈၅၇ KB)
ဝှာင်ဏအ် ဒှ်ဝှာင် နူကဵု Wikimedia Commons တုဲ မဒှ်ဝှာင် မသုင်စောဲလဝ် နကဵုပရဝ်ဂျေတ် တၞဟ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရ၊၊ အရာမလဴထ္ၜး ပ္ဍဲဝှာင်တအ်ဂှ် မုက်လိက် မလဴထ္ၜး ဝှာင် ထ္ၜးကဵုလဝ် အတိုင်ဗွဲသၟဝ်ဝွံရ၊၊
ကဵုယၟုSymptoms of coronavirus disease 2019 4.0.svg
သင်တတ်နိုင်လျှင်အခြားဘာသာစကားများသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအားဖြင့်ဤဖော်ပြချက်ကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီအောင်ကူညီပါ။ – ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စၟတ်တ္ၚဲ ၂၇ ဨပြဳ ၂၀၂၀
တမ်ရိုဟ် ကမၠောန် ဇကုအပိုင်
ကဝိ Mikael Häggström, M.D.
Bahasa Melayu (မလေး)
Runa Simi (ခီချူဝါအိုဝါ)
ဤဖိုင်ကို Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication အောက်တွင် ရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ဍဵု လတူ စၟတ်တ္ၚဲ/အခိင် မွဲမွဲ သွက်ဂွံ ထ္ၜးကဵု ဝှာင် မကတဵုဒှ်လဝ် ပ္ဍဲအခိင်ဂှ်၊၊
လၟုဟ် ၀၁:၃၈၊ ၂ ဂျောန် ၂၀၂၀ ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ (၈၅၇ KB) আফতাবুজ্জামান File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for bn.
၁၅:၄၀၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၀ ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ (၈၄၆ KB) Nisetpdajsankha File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for km.
၁၅:၀၁၊ ၁၂ မေ ၂၀၂၀ ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ (၈၄၆ KB) Nisetpdajsankha File uploaded using svgtranslate tool (https://svgtranslate.toolforge.org/). Added translation for km.
၂၁:၄၈၊ ၃၀ ဨပြဳ ၂၀၂၀ ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ (၈၃၅ KB) Betseg File uploaded using svgtranslate tool (https://tools.wmflabs.org/svgtranslate/). Added translation for tr.
၂၁:၁၆၊ ၂၇ ဨပြဳ ၂၀၂၀ ၁၉၇၂ × ၁၀၀၁ (၈၂၅ KB) Mikael Häggström Slight compression
၂၀:၅၉၊ ၂၇ ဨပြဳ ၂၀၂၀ ၂၀၅၃ × ၁၀၀၁ (၈၂၅ KB) Mikael Häggström Uploaded own work with UploadWizard
အရာမဆက်ဗက်ကၠုင် page links ကုဝှာင်ဏအ် ဂမၠိုင်ဂှ် -
ဗွဲသၟဝ်ဏအ်ဂှ် ဒှ်အရာ ဝဳကဳတၞဟ် မစကာလဝ် ဝှာင်ဏအ်၊၊
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ as.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ awa.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ en.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ he.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ja.wikibooks.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ km.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ min.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ mt.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ss.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ sw.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ th.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ tr.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ts.wikipedia.org
ဗီုစကာ ပ္ဍဲ ur.wikipedia.org
ပ္ဍဲဝှာင်ဏအ်ဂှ် နွံဒၟံင် နကဵုအရာမဗပေင်စုတ်လဝ်ရ၊၊ မဒှ်အရာ မဗပေင်စုတ်လဝ် နူကဵု ကမ္မရာ ဒဳဂျဳတေဝ် ဟွံသေင်မ္ဂး နူသကေန်နာ မွဲမွဲ ဒှ်မာန်ရ၊၊
ယဝ်ရ ဝှာင်ဂှ် ဒးဒုင်ပလေဝ်ပလေတ် နူတမ်မူလဍေဟ်မ္ဂး၊ အရာလ္ၚဵုတအ်ဂှ် ဟွံမံက် ပ္ဍဲဝှာင်ဂှ် ဒှ်မာန်ရ၊၊
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wikipedia.org/wiki/ဝှာင်:Symptoms_of_coronavirus_disease_2019_4.0.svg"
ဗဵု ပ္ဍဲ Wikimedia Commons
စုတ် တမ်ရိုဟ် ပရူပရာ ဒေသ